Prof. Dufle Ayaa Kusoo Baxay Doorashadi Aqalka Sare Ee Lagu Qabtay Xarunta DG Hir-Shabeelle – Great Banaadir
JOWHAR – Prof. Cismaan Maxamuud Maxamed (Dufle) ayaa markii labaad loo doortay inuu noqdo Senator katirsan Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, kadib Doorasho Caawa ka dhacday Magaalada Jowhar.
Kursiga uu ku soo baxay Prof. Dufle ayaa waxaa kula loolamayay Murashixiinta kala ah Danjire Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan) oo ah Danjiraha Soomaaliya ee Dalka Kenya iyo Raage Xasan Cismaan (Xuuti) oo isna Nin Dhallinyaro ah.
Prof. Dufle oo lasii saadaalinayay in uu Tartan Adag kala kulmi doono Danjire Tarsan, ayaa noqon sidii lasii saadaalinayay, kadib markii uu Danjire Tarsan uu ku haray Wareeggii 1aad ee Doorashada, waxayna Wareegga 2aad isula soo gudbeen Murashax Raage Xasan Cismaan (Xuuti).
Wareegi 2aad ee Dooraashada waxaa uu Prof. Dufle uu Xildhibaanada Baarlamaanka ee Dowlad Goboleedka Hir-Shabelle uu ka helay 68 Cod, halka Xuuti uu isna ka helay Xildhibaanada Baarlamaanka Dowlad Goboleedka Hir-Shabelle 28 Cod oo keliya.
Prof. Dufle wuxuu noqday Senatorkii 4aad ee lagu doorto Xarunta Dowlad Goboleedka Hir-Shabelle, waxaana hada harsan 4 Senator oo ay dooran doonaan Xildhibaanada Baarlamaanka Dowlad Goboleedka Hir-Shabelle, kol-haddii uu Sedkoodii Aqalka Sare ee Barlamaanka Federaalka Soomaaliya uu ka noqday 8 Kursi oo keliya; welina ay kusii qanacsan yihiin.
Isha Warkan: Universal TV Somali + Xog Ogaalo Kale